what, when, why: आफ्नो कम्प्युटरको Driver हरुको backup राख्नुहोस्
आफ्नो कम्प्युटरको Driver हरुको backup राख्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर फरम्याट गर्नुहुन्छ र फेरी Windows re-instal गर्नु हुन्छ तपाईं सँग भएको आफ्नो कम्प्युटरको motherboard CD निकाल्नु हुन्छ र Sound,Lan,Graphics आदीको Driver फेरी instal गर्नु हुन्छ । तपाईंको लागि यो motherboard CD एकदम Important छ र यसलाई एकदम सुरक्षित राख्न जरुरी छ तर मानीलिनुहोस् कि तपाईंको यो Important CD हरायो ... अब के गर्नु हुन्छ ? तपाईंले भन्नु हुन्छ "म ईन्टरनेटमा सर्च गर्छु र आफ्नो कम्प्युटरको motherboard को driver खोजेर डाउनलोड गर्छु ।" तर एक त तपाईंलाई ईन्टरनेटमा यो खोज्न धेरै टाईम लाग्छ अर्को तपाईंलाई आफ्नो motherboard को Model no. थाहा हुँदैन र समस्या आउन सक्छ । यो सबै समस्याको समाधान गर्न तपाईंको लागि एउटा राम्रो Application सफ्टवयर छ ।
यो सफ्टवयरले तपाईंको PC को driver हरु १००% अपडेट राख्छ र तपाईंको Pc को कार्यक्षमता छिटो राख्न मद्घत गर्छ । Windows को लागि यो एउटा शक्तिशाली driver manager हो र यसले तपाईंको माउसको एक क्लिक ले तपाईंको PC को driver हरुको Backup,Restore,search र Update automatically गरिदिन्छ ।
यो सफ्टवयरले के के काम गर्छ त ?
@ तपाईंको कम्प्युटरको device ड्राइभरहरुको backup छिटो र सजिलै गरिदिन्छ ।
@ तपाईंको कम्प्युटरको ड्राइभरहरुको backup ZIP अथवा EXE self-extraction file मा परिवर्तन गर्न सक्छ ।
@ आफ्नो ड्राइभरहरुको Clone बनाउन सक्नु हुन्छ र Auto-setup package बनाउन सक्नुहुन्छ ।
@ आफ्नो installed device हरुको detailed information पाउन सक्नुहुनेछ ।
@ आफ्नो driver हरुको search गर्न सक्नुहुन्छ , ईन्टरनेट कनेक्सन नभए पनि ।
@ आफ्नो कम्प्युटरको recent driver सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ ।
@ आनो माउसको एक क्लिक ले आफ्नो कम्प्युटरको driver हरुको update गर्न सक्नुहुन्छ ।
@ driver हरुको live update information अन्लाईन पाउन सक्नुहुन्छ ।
यो सफ्टवयरले तल उल्लेखित Operating Systems हरुमा काम गर्छ ।
ME/2000/XP/2003/Vista/XP x64/Server 2003 x64/Vista x64
( यो सफ्टवयर डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला )
( यो सफ्टवयरको अफिसियल डाउनलोड साईटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला )
is that free softwear........?
hi namaste rameshji..! license code..मागी रहेछ भने त्यो code कहां पाईन्छ, कृपया भनि दिनु भए आभारी हुनछु,... धन्यबाद।